नयाँ बर्ष देशभर बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै/शान्ति र स्थायीत्वको कामना | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← आफनै पार्टीका कार्यकताले नचिनेका मन्त्री
नेपालका अर्थ राज्यमन्त्रीनै भारतीय नागरीक !!! हेरौ उनको पासपोट सहित →
नयाँ बर्ष देशभर बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै/शान्ति र स्थायीत्वको कामना
काठमाडौ बैशाख १ -आज २०६८ साल बैशाख १ गते अर्थात नयाँ बर्ष । नयाँ बर्षको अवसरमा एक आपसमा शान्ति, स्थायीत्य, सुख समृदिको कामना गर्दै नेपाल र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुले आज नयाँ बर्ष मनाइरहेका छन् । आजको दिन नयाँ काम सुरु गरेर त्यसले सफलता पाउने जनमानसमा विस्वास रहेको छ । आजको दिन राम्ररी पढे बर्षभरी पढ्न जागर चल्ने भन्दै बिद्यार्थीहरु आजको दिन पर्ढाईमा बिशेष जोड दिने गर्दछन् । यस्तै व्यापारी, कर्मचारी, मजदुरहरुले पनि आफ्नो उदेश्य पूर्तिका लागी नयाँ योजना निर्माण गर्ने गर्दछन ।
नयाँ बर्षको अवसरमा एस एम एस द्धारा शुभकाम आदान प्रदान भइरहेको छ । आज नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेकाले नागरिकहरु नयाँ बर्ष मनाउन आफन्त, साथीभाई तथा आफन्तहरुसँग भेला भएका छन । नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार नयाँ बर्षको अवसरमा पठाइने एस एमएस् हृवात्तै बढेको छ । नयाँ बर्षको अवसरमा आदान प्रदान भएका कतिपय मोवाइल एस एमएसहरुमा भने राजनीतिक दलका नेताहरुको गतिबिधि प्रति असन्तुष्टि व्यङग गर्दै त्यस्तो कहिले नहोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गरिएको पाइएको छ ।
हिजोदेखि अत्याधिक रुपमा नयाँ बर्षको शुभकामना मोबाइल एस एमएस आदान प्रदान प्रदान भएको टेलिकमले जनाएको छ । यस्तै फेसबुकमा पनि एसएमएमको बाढी आएको छ । नयाँ बर्ष मनाउन होटल, पार्टी प्यालेसहरु खचाखत भरिएको छ भने पार्क र मठमन्दिरहरुमा भक्तजन तथा मानिसहरुको भिड लागेको छ ।
नयाँ बर्षको शुभकामना प्यारी सुन्तलीलाई
दिन आज गयो, भोली गयो जती दिन बितेपनी आफ्नै दिन बितेका छन सँगसङै भित्तामा झुन्डिएको पत्रोका पन्ना हरु मासिक रुपमै बदलियएका छन। पल्टाइन्छ सबै भित्ते पत्रोका पन्ना हरु खुशी खुशी का साथ् । तर आज गए आफ्नै दिन भोली गए आफनै दिन चिन्ता कस्को ? हुन त गएका बिगत ल्लाई सम्झेर तड्पीन भन्दा बरु नसम्जेको नै बेश ।
तर यो कलम कस्तो अप्जसिलो ? सधैं बिगतका घटनालाई घच्घघचाइ रहन्छ । नुतन दिनको नयाँ ताजा खबर पनि यही कलमले पस्किन्छ । त्यसैले होला तिहारमा म प्रदेशी भाईको पत्र सबै दिदिहरुलाई म बिशेष रूपमा उठाएकी अछामकी प्रहरी युबती सुन्तली धामिको प्रसँग आज पनि कोट्टाऊन मन लाग्यो । समयले पात्रोको अस्मिता बुझाए कै करण हामी पत्रोका पन्ना पल्टाउन वाध्य छौ । तर यहाँ दिनदहाडै त्यो पनि सुरक्षर्था खटिएकी महिला प्रहरिको पेटिकोट पल्टाउने ति अपराधी लाई आजसम्म कारबाही नहुँदा नयाँ बर्षको शुभकनना दिन पनि अल्छि लगिरहेको थियो । त्यसर्थ शुभकामनाका शब्द पनि ढिलाई गरेर प्रेशित गर्दैछु ।
आखिर नेपालको सुरक्षा प्रशान , कानुनी ब्यबस्था र आस्थिरताको प्रसँग कस्तो दयानिय रहेछ भनेर पुर्पुरोमा हात लगाउन पर्दैन । बेकार तालुको रौ किन झार्ने ? ए होइन म पनि कहाँ भुत्तुक्कै भाबनामा बिलिन भएछु । आखिर बहिनी , श्रीमती , भान्जी , बुहारी , छोरी ,नातिनी माथि गिद्दे आँखा लगाउनेलाई के भन्नुहुन्छ ? एक पटक पनि नसोच्ने ति अपराधी प्रहरिलाई मेरो फेरी पनि पिच्च पिच्च ! अनी पटक पटक थुक्क थुक्क पनि ।
तर जे होस् ति बलत्किरित सुन्तली धामिलाई म त न्याएको लागि लड्ने र पुरस्क्रित हुनु पर्ने दरिलो मुटु भएकी विश्वकै स्वर्बश्रेस्ठ नारी भन्छु । अछामकी महिला प्रहरी सुन्तली धामी पूर्वकी उमा सिंह र पश्चिम रुकुम कि पत्रकार टिका बिष्ट , यी नेपाली आकाशका नक्ष्यत्र हुन। जो भौतिक रूपमा एस संसारमा रहेपनी नरहेपनी सधैं अंमर रहनेछ र रहनु पनि पर्छ।
Posted by agnibana on अप्रील 14, 2011 in Uncategorized